ICasa do Olival-Figueiró dos Vinhos - I-Airbnb
ICasa do Olival-Figueiró dos Vinhos
Casa ukwenza Olival yindawo efanelekileyo ezitshatileyo, iintsapho okanye amaqela abahlobo abakhangele, kuba ngempela-veki okanye ngexesha leeholide, onwabele yoxolo ukuqhama yenkcubeko Ilali kwelizwe kunye / okanye ukuhlola ubuhle bendalo ukuba linikeza mmandla.
Ijikelezwe sisitiya, le ndlu iphakathi kwemithi yomnquma apho kukho nemithi yeziqhamo. Oku kuvumela iindwendwe zethu ukuba zikhethe iiorenji zejusi yesidlo sakusasa, okanye iminquma kwisidlo sangokuhlwa.
Indlu inomthamo wabantu abayi-6 kwaye inendawo yangaphakathi ejikeleze i-80 m2. Kumgangatho ongaphantsi kukho ikhitshi, indawo yokutyela neyokuhlala kunye nendlu yangasese yeendwendwe.
Phezulu, kukho igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala ama-3 (ama-2 anebhedi ephindwe kabini lilinye kunye ne-1 enebhedi ezimbini ezingatshatanga).
Ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu segesi kunye nesifudumezi samanzi, imicrowave, umatshini wekofu, umenzi wekofu, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, itoaster, iketile, izixhobo zokupheka, izitya, i-cutlery, iayini kunye nebhodi yoku-ayina.
Kukho i-intanethi/i-wifi kuyo yonke indawo, kunye nesitovu seenkuni esibaswayo ngobusuku obubandayo.
Kwabancinci kukho imidlalo emininzi yangaphakathi nangaphandle, ibhedi kunye nesitulo sokutya sabantwana.
Kwigumbi lokuhlala ungafumana indawo ye-BookCrossing, apho sikhuthaza ukufunda ngokutshintshiselana ngeencwadi ngeelwimi ezahlukeneyo.
ICasa do Olival nayo inepatio/solarium kunye neveranda enegriza. Ngaphandle, iindwendwe zethu zinokonwabela ukutya kwangaphandle njengoko indlu inefenitshala yangaphandle (itafile yokutyela kunye nezitulo, izitulo zokuphumla, iitafile ezisecaleni, iambrela).
Ngaphandle kwemekobume yasemaphandleni eyonwabelayo, iCasa do Olival ikumgama osisi-7 okanye esi-8 kuphela ngeenyawo ukusuka kumbindi welali, ibe yindawo ezolile kwaye enoxolo.
Siyafumaneka ukukunika lonke ulwazi oluyimfuneko, ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: 39917/AL